Lifesize Abafazi abakhulelweyo abathandana ngesondo abancinci
Olona Doli lweSondo luKhulelweyo oluPhambili luThengisa uMgangatho oPhezulu
Ukuba uphupha ngobudlelwane bezesondo ezinobundlobongela kunye nomfazi okhulelweyo, le yiparadesi yakho. Oonodoli abakhulelweyo apha banokwanelisa iminqweno kayihlo. Babonakala bekhulelwe iinyanga ezimbalwa, kwaye sele betyebile kwaye banezinqe ezibanzi kunye nemilenze ukuba uthanda umfazi okhulelweyo omile ngokugqibeleleyo. Aba mama abakhulelweyo banokuhlangabezana neemfuno zakho. Bahlala benxiba ezona mpahla zibhityileyo ukubonisa isisu sabo. Olu luhlobo lozuko. Bekufanele ukuba ulubonile I-porn ye-doll ekhulelweyo, imincili yokulala nonodoli wesondo okhulelweyo, ngaba ukhe wayifumana? Oonodoli abakhulelweyo sisithethantonye okwangoku, kwaye ikwayindlela yophuhliso yoonodoli besini. Ukukuvumela ukuba ufumane amanyathelo oonodoli bezesondo abaqhelekileyo, sibonelela ngonodoli wesondo okhulelweyo, hayi oko kuphela, ukongeza kukukhulelwa okuqhelekileyo. I-TPE sex doll, Sikwanayo nonodoli we-silicone okhulelweyo wesondo owukhethayo.
Umfazi okhulelweyo Big Belly Adult Partner 160CM Wide Ass encinci Isifuba se-TPE u-Adam Harrington
Idoli ekhulelweyo yesini iyathengiswa ngexabiso eliphantsi
Yintoni unodoli wesondo okhulelweyo?
Ngokungafaniyo noonodoli bezesondo abaqhelekileyo, le mizekelo yenzelwe ukulinganisa inkangeleko kunye nemvakalelo yowesifazane othwele umntwana. Ukusuka kwizisu ezinkulu, ezingqukuva ukuya kumabele adumbileyo, uluhlu lwethu lwenziwe ngezinto ezintle ezinika imvakalelo yokwenene xa uziva ufuna ukonwaba. Xa ufuna isithandwa sakho sibe namagophe ngakumbi, ukhulelwe idilesi yesilicone yesini iya kukuvumela ukuba ube nefantasy yakho yokulala nomfazi omhle, ochumileyo nanini na xa uthanda. Owasetyhini ngamnye okhulelweyo uyilwe ngengqwalasela enzulu kwiinkcukacha ukukunika amava obomi obuyinyani: ijiko elithambileyo lesisu sakhe esikhulelweyo ngaphantsi kwesakho xa umthatha, indlela amabele akhe anzima aziva ngayo ezandleni zakho njengoko uslayida kuye. pussy kunye neesile ngasemva. Olu luhlobo lwesondo oye wakwazi ukuphupha ngalo ngaphambili, kwaye ngoku isithandwa sakho esitsha esikhulelweyo asikwazi ukulinda ukukunika yonke into kunye nokunye okufunekayo.
Zeziphi iiNzuzo zoLuhlu loonodoli bethu abakhulelweyo?
Inkangeleko yokwenyani kunye neMvo, Ukongeza kwiinzuzo ezonwabisayo zenkangeleko yokwenyani kunye nokuziva, uyilo oluchanekileyo ludala inkohliso eneenkcukacha eziphakamisa iphupha kwaye zidale ubuqabane. Nokuba ukwimo yengqondo yokuba nomsindo okanye ufuna ukubukela iTV, ubunyani bonodoli wakho okhulelweyo wesondo uya kukwenza uzive ngathi umfazi usecaleni kwakho, ukusuka kumbala we-nail polish kwizandla zakhe ezineenkcukacha ezininzi ukuya. umbala wolusu lwakhe oluthambileyo nolufana nobomi. Ukuchukunyiswa komntu njengombala weenwele kunye nesimbo, umbala wamehlo, umbala wengono kunye nobukhulu, kunye nendlela ami ngayo okanye alala ngayo konke ngokomyalelo wakho: obu buhle buchumayo bubobakho ngokupheleleyo kwaye akoyiki ukububonisa. Ezi oonodoli bezesondo abakhulelweyo be-premium hayi nje a unodoli wesondo otyebileyo nge padding eyongezelelweyo kancinane, zibunjwe kwaye ziqingqwe ukuze zibukeke kanye njengeqabane lokwenene elikhulelweyo.
Ngaba ufuna ukulala ngesondo kunye nabasetyhini abanodoli abakhulelweyo?
Jonga kwiiqoqo zethu ezintle zoonodoli abakhulelweyo. Ngoku sele bekulungele ukukhupha umntwana. Thatha ithuba, nali ithuba lakho lokuzalisekisa ingcamango yakho yezesondo yokuba usondelene nomfazi okhulelweyo.Uya kukwazi ukufumana isithandwa esikuphambanisa ngenkanuko, nokuba usaqala ukubonisa kwi-trimester yokuqala, ejikelezayo. uphume kwi-trimester yesibini, okanye uthwele nzima kwaye uzele bubomi obutsha kwi-trimester yakhe yesithathu. Qhubeka, ukubetha, ukucinezela, kwaye ubambe isisu sakhe esikhulelweyo kunye namabele amnandi: uvuliwe kwaye ubuhlungu ngenxa yokubamba kwakho ukwanelisa iimfuno zakhe. Ungumfazi kuyo yonke ingqiqo yegama, kwaye ufuna ngokunyanisekileyo ukukubonisa ubumnandi besini esikhulelweyo emlonyeni wakhe othambileyo, i-pussy eyamkelekileyo, kunye ne-esile encinci eqinile njengoko umpompoza egcwele imbewu yakho echumileyo.Izidweliswe ngezantsi zezona zilungileyo. kunye nonodoli wesondo okhulelweyo wamva nje, unodoli wesondo olingana nobomi, kwaye uya kufumana ukhetho oluhle kakhulu. idoli yesini eyindoda, oonodoli abafana nobomi, Oonodoli baseJapan apha.Amadoda amaninzi aphupha ngokulala nomntu okhulelweyo. Oonodoli besondo abakhulelweyo ukuze bakhuseleke, ecocekileyo, kunye nendlela eyonwabisayo yokuphila ngeengcinga zakho. Nokuba ukhangela ntoni na, sinesondo esigqibeleleyo sokukhulelwa thanda unodoli yeyakho.